अब मोटरसाइकल र कारमा नयाँ नम्बर प्लेट ! – Khabarhouse
अब मोटरसाइकल र कारमा नयाँ नम्बर प्लेट !
Khabar house | २९ माघ २०७६, बुधबार १६:४७ | Comments
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले फागुन भित्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्न सुरु गर्ने भएको छ । विभागले हाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्टका लागि आवश्यक तयारीको काम गरिरहेको महा निर्देशक गोगन हमालले जानकारी दिए । उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागि कार्यालय व्यवस्था र प्रिन्टर मेसिन सेटको काम भइरहेको जानकारी दिए ।
साथै, अहिलेसम्म पनि अदा’लतको पूर्ण पाठ नआएको कारण नम्बर प्लेट छपाई सुरु हुन नसकेको बताए । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउन प्रदेशहरुसँग समन्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको तयारी गरि रहेका छाैँ, फागुन भित्रै इम्बोस्ड नम्बर प्रि’न्टको काम सुरु गर्न सकिन्छ,’ महानिर्देशक हमालले मेरोअटोसँग भने । उनले अदालतको पूर्णपाठ आए सँगसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्रिन्ट र आवेदन अनुसार गाडी तथा मोटरसाइकलमा लगाउन सुरु गर्न सकिने जनाए ।
१७ जेठ २०७३ मा नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेको इम्बोस्ड नम्बरप्लेट छाप्ने काम त्यसमा प्रयोग भएको अक्षरलाई कारण देखाउँदै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा परेसँगै रोकिएको थियो। सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी कि नेपाली भाषा राख्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । नेपाली भाषा तथा राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आघात पुगेको भन्दै रिट सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेको थियो ।
गत मंसिर २७ सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरिदिएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने काम सुरु गर्ने तयारी भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले हालेको उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त रिट खारेज भएको करिब २ महिना हुन लागिसक्दा पनि अदालतको पूर्ण पाठ नआएका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको छपाई सुरु हुन सकेको छैन ।
२०७४ फागुन ६ मा रिट दर्ता भए पश्चात् इम्बोस्ड नम्बरको प्रिन्टीङ कार्यमा रुकावट आएको थियो । अदालतले उक्त रिट गत मंसिरमा खारेज गरेता पनि पुन इम्बोस्ड नम्बर प्रिन्टीङको काम सुरुवात हुन सकेको छैन पाएको। सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेक्का दिँदा बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग गरिएको सम्झौतामा ‘सरकारका कारण बाधा भई तोकिएको समया अवधिमा काम पूरा नभए ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम ठेकेदार कम्पनीले पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ। अहिले बजारमा तिन थरीका नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनहरु गुडिरहेका छन् ।